WMV ka AVI Ntụgharị: Olee otú iji tọghata WMV ka AVI on Windows / Mac
> Resource> tọghata> Olee otú iji tọghata WMV ka AVI na Windows na Mac
Ọ bụ ezie na WMV bụ ihe kasị ugboro ugboro ji faịlụ Ọkpụkpọ maka na ịchekwa media faịlụ, ọ bụ naanị nabatara ma ọ bụ na-akwado site kpọmkwem ngwaọrụ dị ka Blackberry Bold usoro ma wdg tụnyere ihe WMV, na AVI faịlụ Ọkpụkpọ ọzọ bụ na-ewu ewu n'etiti ngwaọrụ dị ka PSP, PS3, Xbox 360 na ọtụtụ ndị ọzọ. Ya mere, ị ga-enwe iji tọghata WMV ka AVI bụrụ na ị chọrọ playback gị WMV faịlụ na AVI akwado ngwaọrụ ma ọ bụ ngwa.
Isiokwu a ga-egosi na ị na nzọụkwụ-site-nzọụkwụ ndu na otú iji tọghata otu WMV faịlụ ka AVI na ma Windows na Mac OS. Iji nọgide na-enwe video si àgwà n'oge akakabarede, a ọkachamara ma mfe na-eji WMV ka AVI video Ntụgharị ukwuu tụrụ aro.
Part 1: Best WMV ka AVI Video Ntụgharị
Part 2: Free WMV ka AVI Ntụgharị
Nkebi nke 3: Online WMV ka AVI Ntụgharị
Nkebi nke 4: Extended Knowlege maka WMV na AVI
Zero àgwà furu akakabarede ihe AVI faịlụ Ọkpụkpọ.
AVI faịlụ Ọkpụkpọ ọzọ bụ dakọtara maka playback na ngwaọrụ.
Na-akwado wuru na-nchịkọta akụkọ nakwa dị ka DVD Okike.
Olee otú iji tọghata otu WMV ka AVI na Mac (ma ọ bụ Windows)
The Video Converter Ultimate bụ nnọọ oké inyeaka na ọ bụghị nanị na faịlụ conversions, kamakwa ndị ọzọ na ebe ndị dị otú dị ka online downloads, edezi na DVD Personalization. Nzọụkwụ chọrọ bụ nnọọ yiri ma na Windows na Mac. Nanị pịa na njikọ maka akakabarede Nduzi na Windows.
1. Import WMV faịlụ na na Ntụgharị
Mbubata gị WMV video faịlụ n'ime Ntụgharị. Ịdọrọ-na-dobe gị faịlụ na na Ntụgharị ma ọ bụ ịnyagharịa Njikwa mgbe ahụ họrọ Ibu Ibu Media Files. N'ihi na ị na ọmụma, nke a video Ntụgharị na-akwado ndị na-ebugote nke videos dekọrọ na AVCHD faịlụ fomat.
2. hazie gị video faịlụ
Ewepụtụ gị video faịlụ na ezigbo oge tupu akakabarede ma ọ bụ hazie ya na mmetụta dị na mgbe ahụ kpatụ iche, saturation ma ọ bụ ndị ọzọ ahụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ re-edit ya, e nwere ihe a Tọgharia bọtịnụ na gị mma.
3. Họrọ mmepụta format si presets
Họrọ AVI si Video (nhọrọ taabụ na ala nke interface). Ọ bụrụ na i bu n'obi na playback ndị a converted faịlụ na a obere ngwaọrụ, e ptimized presets ka ịzọpụta gị site na-eme nchọgharị maka kasị mma format ntọala. Ozugbo ị na-agụ, pịa na tọghata bọtịnụ na ka Ntụgharị na-elekọta ndị ọzọ.
Video Tutorial: Olee otú Jiri WMV ka AVI Video Ntụgharị na Mac
# 1. Free Video Ntụgharị: Wondershare Free WMV ka AVI Ntụgharị
Ọ bụrụ na ihe niile ị chọrọ bụ ihe dị mfe akakabarede na ụfọdụ trimming atụmatụ, na free video Ntụgharị niile bụ gị! Na n'elu nke, ị ka pụrụ ibudata ọkacha mmasị gị music video si YouTube na tọghata ya n'ime ihe MP3 n'ihi na gị music n'ọbá akwụkwọ.
Pro: zuru oke free!
1. Nanị na-akwado ndị akakabarede ejikarị faịlụ Ọkpụkpọ.
2. Standard ọsọ nke akakabarede.
3. Ọ dịghị nkwado maka sobtaitel si Fanye.
Nkebi nke 4: Na ihe ọmụma n'ihi na WMV na AVI Format
WMV bụ nwa afọ faịlụ Ọkpụkpọ introducted site Microsoft. Ọ na-ndammana akwado ma mee dakọtara na niile nke Windows-operating ma ọ bụ dabeere na usoro, usoro ihe omume na software. AVI bụ a multimedia akpa na e dere ma ọdịyo na video data. Ọ na-ekwe synchronous audio-na-video playback. AVI faịlụ akwado multiple gụgharia ọdịyo na video
Olee otú iji Tinye ndepụta okwu ka MP4 Files Ihe ọmụma zuru ezu na AVI faịlụ Ọkpụkpọ